मोडल निशा रावलको स्वास्थ्यामा सुधार -
६ असार,काठमाडौं-कला क्षेत्रमा जम्दै गरेको एउटा नाम हो निशा घिमिरे । पहिले र अहिलेको यो अवस्था देख्दा मेरो मात्र होइन देख्ने जो कोहीको आँखा रसाउछ होला सायद। उनको अहिलेको यो अवस्था देख्दा जो कोही निशब्द बन्छ । नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएपछि मोडल निशा घिमिरेको अनुहारमा चमक देखिएको छ । जीवन म’रणको दो’साधमा रहेकी उनको अस्पतालको बेडबाट ताजा तस्वीर सार्बजनिक भएको छ । ३ बर्ष अगाडि अभिनय कोर्स पढ्नका लागि भारतको देहरादुन जाँदै गर्दा सडक दु’र्घट,नामा परेर ग’म्भिर घा’इते भएकी मोडल निशा घिमिरेको नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएको छ । घा’इते भए लगतै निशाको उपचार भारतमा भैरहेको थियो ।
तर, उनको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण भारतमा उपचार हुन सकेन र उनको परिवारले उनलाई नेपाल ल्याएर उपचार सुरु गरेको थियो । काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा ३ महिना उपचार भएपनि उनको अवस्था सुधार हुन सकेन । सामान्य परिवारमा जन्मेकी निशाको बुबाले कृषि कामबाटै परिवारलाई पालेका थिए। घरकी जेठी छोरि अब ठुली भई भन्ने बेलामा यस्तो अवस्थामा हुदा धेरै नै पि,डित बनेका छन् निशाका बुबा।
कृषि पेश बाट लगभाग ३ बर्षसम्म आफ्नी श्रीमती र छोरिको उपचारमा लागेका उनले अब भने उपचार गर्न नसक्ने भए। घरमा पढ्दै गरेको छोराले पनि दिदीको अवस्था देखेर पढ्न छोडेर कृषि पेशमा लाग्यो। त्यहि बाट आएको कमाइले नै छोरिको उपचार भएको छ।
घरमै अ’र्धचे’त अवस्थामा रहेकी उनी बोल्न सक्दिनन् भने अरुले खु’वाइदिनुपर्छ । कसैले केही कुरा गर्यो भने सुन्न सक्छिन् र आँसु बगाउने गर्छिन् तर जवाफ दिन वा अरुलाई रे’सपोन्स गर्न सक्दिनन् ।
हातखुट्टा नै कुँ’जिएर ओ’छ्यान परेको ३ वर्ष भैसक्यो । उनलाई छोडेर कति जान हुदैन ,एक जना उनको साथ्हिमा बस्नुपर्छ होइन भने उनि रुन्छीन बिहीबार बिहान उनको उ’द्धार गरिएको हो । उनको सहयोगको लागि बुबाले अपिल गरेका छन्। बुबाको नाम प्रेम प्रसाद घिमिरे – 9851238952 र उहाको बैंकको खाता न. 0840613613205001 मा सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Previous ९ वर्षीया बालिकाको ह’त्या,शब् भेटियो यस्तो अव!स्थामा
Next उपत्यकामा भोलिबाट लागू हुने ‘स्मार्ट लकडाउन’ ? सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय